Mutambo unochinja munyika yeCommerce, hapana imwe kunze kweiyo Shopify chikuva. Chaizvoizvo, iyo yekutenga app inoshongedza iyo yese nhare yekutenga ruzivo, iko, kuwanikwa, kubhadhara, uye kuendesa mune imwechete application. Vatengi vanopinda paapp neemail, vachitevera akasiyana Shopi ...
Kana zvasvika kune yako e-commerce webhusaiti, kupa yakanaka mushandisi ruzivo (UX) inotora zvakawanda kupfuura kungoita-rinotaridzika dhizaini. Inosanganisira akati wandei zvinhu, zvese zvinoshanda pamwechete, kubatsira vanhu vanoenda kunzvimbo ino kutenderera uye kuwana izvo zvavari kutsvaga. Kubva pane zvigadzirwa zvechigadzirwa kusvika ...
Carrie Lam anopika kuchengetedza chinzvimbo cheHong Kong senge avhiyesheni, logistics hub
Chief Executive of China's Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Carrie Lam akadaro neMuvhuro kuti hurumende yeHKSAR yakazvipira kuchengetedza chinzvimbo cheHong Kong sedanho renyika dzekunze, nzvimbo yepasi rose yegungwa uye nharaunda yekutakura zvinhu. Lam akaita iyo rema ...
American Airlines kune vashandi zviuru makumi maviri nezvishanu muna Gumiguru
American Airlines kune vashandi zviuru makumi maviri nezvishanu muna Gumiguru American Airlines ichapa zviziviso kune vashandi zviuru makumi maviri neshanu zvavangatarisana nazvo zvingangoitika musi waGumiguru 1, vatungamiriri vaviri vepamusoro vakati mumemo kuvashandi neChitatu. Iyo federal bailout yeiyo ndege indasitiri, iyo ichasimudzwa muna Gumiguru 1, ...
Chii chinonzi 3pl uye inozadzisa sei maodha?
Kunyangwe iwe uri e-commerce & muridzi webhizimusi rekubhadhara mari, paunofunga kutanga, odha kuzadzikiswa chikamu chakakosha chebhizimusi rako. Sezvo basa rako parinofambira mberi, zvishoma nezvishoma unowana zvichinetsa kubata basa rekurongeka kuzadzikiswa mumba uye unofarira kushandisa yakawanda nguva ...